Iye zvino inowanikwa vhezheni 129 yeSafari Technology Preview | Ndinobva mac
Safari Technology Preview vhezheni 129 ikozvino yavapo
Apple yaburitsa itsva yekuvandudza yeSafari Technology Preview, browser rekuyedza iyo Apple yakaratidza kekutanga munaKurume 2016. Apple yakagadzira iyi vhezheni kuti ikwanise kuyedza izvo zvitsva izvo zvaizotevera zvinosanganisira vhezheni yeSafari yatinoziva tese. Iyi vhezheni nyowani inosanganisira gadziriso uye kugadzirisa mashandiro.
Safari Technology Ongororo vhezheni 129 inosanganisira kugadzirisa bug uye kugadzirisa mashandiro yeWebhu Inspector, CSS, Kupuruzira, Kupa, WebAssembly, WEB API, Platform Zvimiro, IndexedDB, Media, WebGL, uye WebCrypto.
Imwe yemabhuku makuru eiyi vhezheni inoreva kuenderana ne macOS Big Sur. Apple inoti mune macOS Big Sur, iyi vhezheni inoda kugonesa iyo GPU Process Media sarudzo kubva kuExpimental Features zvigadziriso muKuvandudza menyu. Kugadzirisa sarudzo kunogadzirisa matambudziko nekushambadzira masevhisi.
Usati watanga kurodha pasi, unofanirwa kuyeuka kuti iyi yazvino vhezheni yeSafari Technology Preview Iyo yakavakirwa pane nyowani yeSafari 15 yekuvandudza inosanganisirwa mune macOS Monterey. Sezvaunoziva, haina kunyanyo rumbidzwa nevashandisi. Kunyanya nekuda kweshanduko yainosanganisira, senge iyo Nyowani yakagadziridzwa tab bar.
Inosanganisira Kurarama Chinyorwa iyo inobvumira vashandisi kusarudza uye kuyanana nemavara ezvifananidzo pawebhu. Izvo zvinoda iyo beta vhezheni ye macOS Monterey uye Mac M1. Iko zvakare kune Sticky Notes rutsigiro rwekuwedzera Safari zvinongedzo uye zvakakosha kuti uzviyeuchidze iwe nezve yakakosha ruzivo uye mazano.
Iyo nyowani Safari Technology Yekutarisa yekuvandudza inowanikwa kune ese macOS Big Sur uye macOS Monterey, yazvino vhezheni yeiyo Mac inoshanda system kuburitswa kudonha uku. Inowanikwa kuburikidza neSystem Preferences software yekugadzirisa mashandiro kune chero munhu anazvo dhawunirodha bhurawuza. Zvizere zvekuburitsa manotsi ezvekuvandudza zviripo pane iyo Safari Technology Preview webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Safari Technology Preview vhezheni 129 ikozvino yavapo
Brendan Fraser ajoina vaScorsese vaurayi veRuva Mwedzi
Nomad anotangisa iyo MagSafe Mount Stand